ikhaya le-pokemon ngeke lisasebenza kulezi zinhlobo ze-android ne-iphone
none Izindaba Nokubuyekezwa I-Pokemon Home ngeke isasebenza kulezi zinhlobo ze-Android ne-iPhone
I-Pokemon Home ngeke isasebenza kulezi zinhlobo ze-Android ne-iPhone
Abazingeli bePokemon abazinikele ngempela abakwazi ukuhlala ngaphandle Ikhaya le-Pokemon , uhlelo lokusebenza lweselula lwamahhala olunikeza abasebenzisi isitoreji samafu sePokemon yabo. Kepha akusona nje isici sokugcina abalandeli abaningi bePokemon abasifunayo lapho besebenzisa i-Pokemon Home. Insizakalo yesitoreji esuselwa emafini futhi ivumela abasebenzisi ukuthi badlulise iPokemon kusuka emidlalweni ehlukene, kufaka phakathi iPokemon GO.
Noma kunjalo, kubukeka sengathi uhlelo lokusebenza lweselula ngeke lusasebenza kumamodeli amadala we-Android ne-iPhone, ngokusho I-Pokemon database Serebii . Kusukela ngoJuni, uhlelo lokusebenza lwePokemon Home luzophela ukuhambisana nawo wonke amadivayisi anikwe amandla yi-Android 5, kanye nama-iPhones asaqhuba i-iOS 9, iOS 10, ne-iOS 11.
Ngaphezu kwalokho, ama-iPhone 5s ne-iPhone 6 azofakwa ohlwini lwamadivayisi we-Pokemon Home angasekelwa. Usuku lokukhishwa ngqo lwe-update hasn & apos; alukaziwa okwamanje, kepha siyazi ukuthi luza ngoJuni futhi lungahle lungenise nezinye izici ezintsha.
Kuze kube yileso sikhathi, qiniseka ukushintshela kudivayisi entsha uma ufuna ukuqhubeka nokusebenzisa i-Pokemon Home. Izinguquko ezizayo azivamile neze, njengoba onjiniyela bezama ukuthuthukisa izinhlelo zabo zokusebenza ngezici ezintsha ezingase zingasekeli amadivayisi anokulungiswa okungaphansi kwezingxenyekazi zekhompyutha noma isoftware ephelelwe yisikhathi.
Ngisho IPokemon GO imemezele emuva ngoSepthemba ukuthi ngeke isasekela amadivayisi afanayo ashiwo ngenhla, ngakho-ke namuhla izindaba ze-apos azikumangazi.
i-ipad esetshenziswe kangcono ukuthenga
asikho isihlungi sogaxekile ku-galaxy s6
inothi elingcono kakhulu elingu-8 nge-kickstand
Iyiphi inketho yokugcina ye-iPhone 11 okufanele ngiyithole? Ngabe i-64GB yanele?
I-AT & T ilandela isudi yeVerizon & apos; ngenkathi ishaya iT-Mobile esibhakeleni ngezinhlelo ze-Unlimited Your Way
IVirgin Mobile Canada neBell Canada izovula i-Apple iPhone yakho uma usuvule isikhwama sakho semali
I-WarnerMedia ibulala uhlelo lokusebenza lwe-HBO Go, HBO Max ende ende
I-AT & T, iVerizon ne-Sprint bakhipha amanani abo onqenqemeni lwe-Samsung Galaxy S6 ne-Samsung Galaxy S6
Ukuhlelwa kwe-Apple & apos; s iPhone iPhone 12 okufanekiselwa ukwakhiwa okuhle
I-T-Mobile inohlelo lokunyusa okwesikhashana ijubane lamanethiwekhi ayo e-4G LTE ne-5G ngesikhathi senkinga
I-Logitech & apos; s Ikhibhodi yomlingo ehlukile manje isiyatholakala nge-iPad Air (2020)
I-Joker Trojan, igciwane eliyingozi le-Android, lithelela iHuawei
I-Verizon & apos; i-GizmoWatch 2 enobungane ifika ne-GPS, 4G LTE, kanye nentengo ephansi ngokumangazayo